ShweMinThar: ဆန်တစ်ပြည် ကျည်ဆန်တစ်တောင့် ထမင်းတစ်စေ့မှာ လုပ်အားတစ်ရာ
သတင်းတွေအရ တိုင်းပြည်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ မြန်ဆန်နေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခြင်း၊ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယ၀န်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့ကို တောင့်တင်းခိုင်မာအောင် အားသစ်လောင်းလိုက်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရသစ်ဆိုတာ အစိုးရဟောင်းရဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေကို ဆက်ခံရစမြဲပါပဲ။ ဆရာဒဂုန်တာရာရဲ့ 'မေ'၀တ္ထုအဖွင့်ဝါကျလို 'လေနုအေးသည် တနွဲ့နွဲ့နော့နေဆဲ ကို'ဆိုတဲ့ သာယာကြည်နူးဖွယ် အခြေအနေတွေကို အစိုးရသစ်က ရလိုက်တာ မဟုတ်ပါ။ မေ၀တ္ထုနောက်ဆုံးဝါကျ ---'အကောင်းကိုရှာ၏ အကောင်းကားမရှိတော့'ဆိုတဲ့ အနေအထားကို ရလိုက်တာမျိုးပါ။
စာပေစိစစ်ရေး မဖျက်သိမ်းခင်ကပင် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဆရာမောင်ဝံသက စာပေလွတ်လပ်ခွင့် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းရနေပါပြီလို့ ပြောခဲ့တာမျိုးဟာ အရှိတရား ပကတိတရားနဲ့ ဘယ်လောက်နီးစပ်ပါသလဲ။ ဆရာမောင်ဝံသက အ ကောင်းမြင်နဲ့ ပြောလိုက်တာလား။ အကောင်းမြင်ဟာ အမှန်တရားနဲ့ ဘယ်လောက် ထပ်တူကျနိုင်ပါသလဲ။ မဆလတစ်ခေတ်လုံး 'အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျား'လို့ လိမ်ညာပြီး အစီရင်ခံစာတွေတင်ခဲ့ကြလို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပကတိအခြေအနေမှန်ကို အထက်လူကြီးတွေ မသိခဲ့ကြဘူး။ သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တိုင်းပြည်က ပျက်နေပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာတင်မိုးက
'ငါတို့ရဲ့ဘ၀တွေဟာ မုသာဝါဒ အစီရင်ခံစာဖြစ်တယ်'လို့ ရင်နာနာနဲ့ ကဗျာရေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ အစိုးရသစ်ရဲ့ တစ်နှစ်ခွဲကာလ သက်တမ်းနုနုလေးအတွင်းမှာ ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေ အများကြီး ရှိနေဆဲပါ။ ဒါကြောင့် လည်း သမ္မတကြီးက ''အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ'လို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့အားနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်မည်ဆိုတော့ . . . ဘယ်အခြေခံ ပေါ်မှာ တည်ဆောက်မှာလဲ။ အားလုံးရဲ့ အားတွေမပါဘဲနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်။
ခုတော့ အသစ်မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အပြင် တည်ဆောက်ပြီးသမျှ အရာရာကို စစ်ကဖျက်ဆီးပစ်လေပြီ။ ရုပ်ဝတ္ထုများ စိတ်ဓာတ်များ လူသားဘ၀၏ တန်ဖိုးများ အရာရာကို စစ်ကဖျက်ဆီးဝါးမျိုလျက်။ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ပျက်ပြီးရင်း ပျက်နေလျက်။
ခုတော့ အသစ်မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အပြင် တည်ဆောက်ပြီးသမျှ အရာရာကို စစ်ကဖျက်ဆီးပစ်လေပြီ။ ရုပ်ဝတ္ထုများ စိတ်ဓာတ်များ လူသားဘ၀၏ တန်ဖိုးများ အရာရာကို စစ်ကဖျက်ဆီးဝါးမျိုလျက်။ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ပျက်ပြီးရင်း ပျက်နေလျက်။ဘယ်သူနိုင်လို့ ဘယ်သူရှုံးသနည်း။
ဒါက ရိုင်းဖယ်ကျည်ဆန်တစ်ထောင့်နောက်မှာ ပါသွားတဲ့ သာမန်တန်ဖိုးမျှသာ ရှိပါသေးတယ်။ ကျည်ဆန်တစ်တောင့်နဲ့ အသက်တစ်ချောင်း ဘ၀တစ်ခု လဲလိုက်ရတာတွေကတော့ တန်ဖိုးအနဂ္ဂအသင်္ချေပါပဲ။ ဒီနေ့မှာတော့ဖြင့်
လူစာမပြောနဲ့ နွားစာအတွက်တောင်မှ ခက်ခဲရှားပါးနေချိန်မှာ လယ်ယာမြေတွေ မတရားသိမ်းယူခံရတဲ့ လယ်သမားများရဲ့ဘ၀ဟာ မြွေပူရာကင်းမှောင့်ခံနေရသလိုပါပဲ။ တုံးအောက်ကဖား ဒီထက်ပြားစရာမရှိတော့ . . .။
ဒီနေ့သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ လျံတက်နေတာက . . . မုံရွာခရိုင် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် လယ်ယာမြေတွေ မတရားသိမ်းယူခံရတာ။ ရွာတွေဇွတ်ရွှေ့ခံရတာတွေ ရင်နင့်ဖွယ် ကြားသိနေရပါတယ်။ ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေဟာ မုံရွာမြို့ပေါ်ထိ တက် လာပြီး သူတို့ရဲ့ နစ်နာမှုတွေကို စာဝေငှ အသိပေးခဲ့ကြောင်း . . .။
ဒါက ၃၁ သြဂုတ်လ ၂၀၁၂ RFA က ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ သတင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ မှတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့ စေတနာကို တန်ဖိုးထား လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့် ပြဿနာတွေအပေါ်မှာ စိတ်ကူးယဉ် တင်ပြပုံမျိုးနဲ့ အဖြေရှာလို့ မရပါဘူး။ ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့ ''တရားမျှတမှု ပေါ်မလာဘူးဆိုရင် ဒါမှမရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အင်နဲ့အားနဲ့ လိုက်ပေးရမယ်'' လို့ ဆိုတဲ့အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရှိနေသေးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
Written by မောင်သွေးချွန်